9 Mgbe ọ na-agafe, ọ hụrụ otu nwoke kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya.
2 Ndị na-eso ụzọ ya wee jụọ ya, sị: “Rabaị,+ ònye mehiere,+ ọ̀ bụ nwoke a ka ọ̀ bụ ndị mụrụ ya,+ nke mere o ji kpuo ìsì mgbe a mụrụ ya?”
3 Jizọs zara, sị: “Ma nwoke a ma ndị mụrụ ya emehieghị, kama ọ bụ ka e wee mee ka ọrụ Chineke pụta ìhè n’ebe ọ nọ.+
4 Anyị aghaghị ịrụ ọrụ nke onye zitere m mgbe ìhè ka dị;+ abalị+ na-abịa, mgbe mmadụ ọ bụla na-apụghị ịrụ ọrụ.
5 N’oge niile m nọ n’ụwa, abụ m ìhè nke ụwa.”+
6 Mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ọ gbụsara ọnụ mmiri n’ala wee jiri ọnụ mmiri ahụ gwọọ ụrọ, wee nyakwasị ụrọ ahụ ọ gwọrọ n’anya nwoke ahụ+
7 wee sị ya: “Gaa saa anya gị+ n’ọdọ mmiri Siloam”+ (nke a sụgharịrị ịbụ ‘Mmiri e zitere ezite’). O wee gaa saa anya ya.+ Ọ lọghachiri na-ahụ ụzọ.+
8 Ya mere, ndị agbata obi na ndị na-ahụbu na ọ bụ onye arịrịọ malitere ịsị: “Onye a ọ́ bụghị nwoke ahụ nke na-anọ ala arịọ arịrịọ?”+
9 Ụfọdụ na-asị: “Ọ bụ ya.” Ndị ọzọ na-asị: “Ọ bụghị ya ma ọlị, kama o yiri ya.” Ma nwoke ahụ na-asị: “Ọ bụ m.”
10 Ya mere, ha malitere ịsị ya: “Oleezi otú e si meghee anya gị?”+
11 Ọ zara, sị: “Nwoke ahụ a na-akpọ Jizọs gwọrọ ụrọ tee m n’anya, sị m, ‘Gaa na Siloam+ saa anya gị.’ M wee gaa saa anya m, hụwa ụzọ.”
12 Ha wee sị ya; “Olee ebe nwoke ahụ nọ?” Ọ sịrị ha: “Amaghị m.”
13 Ha duuru nwoke ahụ kpuburu ìsì gakwuru ndị Farisii.
14 Ọ bụ n’Ụbọchị Izu Ike+ ka Jizọs gwọrọ ụrọ wee meghee anya ya.+
15 Ya mere, ndị Farisii malitere ugbu a ịjụ ya otú o si hụwa ụzọ.+ O wee sị ha: “Ọ nyakwasịrị m ụrọ n’anya, m wee saa ya, hụwa ụzọ.”
16 Ya mere, ụfọdụ n’ime ndị Farisii malitere ịsị: “Onye a esighị n’ebe Chineke nọ bịa, n’ihi na ọ dịghị edebe Ụbọchị Izu Ike.”+ Ndị ọzọ malitere ịsị: “Olee otú onye bụ́ onye mmehie pụrụ isi na-eme ụdị ihe ịrịba ama ahụ?”+ Ya mere, e nwere nkewa+ n’etiti ha.
17 N’ihi ya, ha sịrị onye ìsì ahụ ọzọ: “Olee ihe i chere banyere ya, ebe ọ bụ na o meghere anya gị?” Nwoke ahụ sịrị: “Ọ bụ onye amụma.”+
18 Otú ọ dị, ndị Juu ekweghị na o kpuburu ìsì ma malite ịhụ ụzọ, ruo mgbe ha kpọrọ ndị mụrụ nwoke ahụ nke malitere ịhụ ụzọ.
19 Ha wee jụọ ha, sị: “Onye a ọ̀ bụ nwa unu nke unu sịrị na o kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya? Oleezi otú o si na-ahụ ụzọ ugbu a?”
20 Ndị mụrụ ya zara, sị: “Anyị maara na onye a bụ nwa anyị, marakwa na o kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya.
21 Ma otú o si hụwa ụzọ ugbu a, anyị amaghị, anyị amaghịkwa onye meghere anya ya. Jụọnụ ya. Ọ ghọọla dimkpa. Ọ ga-azara ọnụ ya.”
22 Ndị mụrụ ya kwuru ihe ndị a n’ihi na ha na-atụ egwu+ ndị Juu, n’ihi na ndị Juu ekwekọrịtaworị na ọ bụrụ na onye ọ bụla ekwupụta na ọ bụ Kraịst, a ga-achụpụ ya n’ụlọ nzukọ.+
23 Ọ bụ ya mere ndị mụrụ ya ji sị: “Ọ ghọọla dimkpa. Jụọnụ ya.”
24 Ya mere, ha kpọrọ nwoke ahụ kpuburu ìsì nke ugboro abụọ wee sị ya: “Nye Chineke otuto;+ anyị maara na nwoke a bụ onye mmehie.”
25 O wee zaa ha, sị: “Ma ọ̀ bụ onye mmehie, amaghị m. Otu ihe m maara bụ na, ọ bụ ezie na m kpuburu ìsì, ana m ahụ ụzọ ugbu a.”
26 Ya mere, ha sịrị ya: “Gịnị ka o mere gị? Olee otú o si meghee anya gị?”
27 Ọ zara ha, sị: “M kọworo ya unu, ma unu egeghị ntị. Gịnị mere unu ji chọọ ịnụ ya ọzọ? Ùnu chọrọ ịghọ ndị na-eso ụzọ ya?”
28 Ha wee katọọ ya, sị: “Ị bụ onye na-eso ụzọ nwoke ahụ, ma anyị bụ ndị na-eso ụzọ Mozis.
29 Anyị maara na Chineke gwara Mozis okwu;+ ma anyị amaghị ebe nwoke a si.”+
30 Nwoke ahụ zara ha, sị: “Ọ bụ nnọọ ihe ijuanya+ na unu amaghị ebe o si ma ya emeghee anya m.
31 Anyị maara na Chineke adịghị ege ndị mmehie ntị,+ kama ọ bụrụ na mmadụ na-atụ egwu Chineke ma na-eme uche ya, ọ na-ege ya ntị.+
32 Malite n’oge ochie, a nụtụbeghị na mmadụ meghere anya onye kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya.
33 Ọ bụrụ na nwoke a esighị n’ebe Chineke nọ bịa,+ ọ pụghị ime ihe ọ bụla ma ọlị.”
34 Ha zara ya, sị: “A mụrụ gị n’ime mmehie,+ n’agbanyeghị nke a, ị̀ na-ezi anyị ihe?” Ha wee chụpụ ya!+
35 Jizọs nụrụ na ha achụpụwo ya, mgbe ọ hụrụ ya, ọ sịrị ya: “Ì nwere okwukwe n’ebe Nwa nke mmadụ nọ?”+
36 Nwoke ahụ zara, sị: “Nna anyị ukwu, ònyekwanụ ka ọ bụ ka m wee nwee okwukwe n’ebe ọ nọ?”
37 Jizọs sịrị ya: “Ị hụwo ya, onye a gị na ya na-ekwu okwu bụ ya.”+
38 Ya mere, ọ sịrị: “Onyenwe anyị, enwere m okwukwe n’ebe ọ nọ.” Nwoke ahụ wee kpọọrọ ya isiala.+
39 Jizọs wee sị: “Ọ bụ ikpe a+ mere m ji bịa n’ụwa a: ka ndị na-adịghị ahụ ụzọ wee hụ ụzọ,+ ka ndị na-ahụkwa ụzọ wee kpuo ìsì.”+
40 Ndị so ná ndị Farisii ya na ha nọ nụrụ ihe ndị a, ha wee sị ya: “Anyị onwe anyị kwa, ànyị kpuru ìsì?”+
41 Jizọs sịrị ha: “Ọ bụrụ na unu kpuru ìsì, unu agaraghị enwe mmehie ọ bụla. Ma, ugbu a, unu na-asị, ‘Anyị na-ahụ ụzọ.’+ Mmehie unu+ na-adịgide.”
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D43%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl